အမြင်မတော်ပါဘူး ဆရာလေးရယ် … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အမြင်မတော်ပါဘူး ဆရာလေးရယ် …
အမြင်မတော်ပါဘူး ဆရာလေးရယ် …
Posted by fatty on Jan 18, 2012 in News, Photography | 38 comments
လေးဖက်ပြောတာဟုတ်တယ်ဗျာ တစ်ချို့ သီလရှင်တွေ ဘုန်းကြီးတွေကလည်း ခက်တယ်ဗျာ
တစ်ချို့ဆို ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာပဲ မလောင်းတဲ့ ကုလားတွေဆီ အလှူခံတယ်ဗျာ ကိုယ်တွေကသာ ခံရခက်လို့ ကုလားတွေဆီ သွားမတောင်းပါနဲ့လို့ လျှာရှည်ပြီး ပြောပြောနေရတာ
မေးပါရစေ… ကုလားတွေ ဆီ သွားမတောင်းပါနဲ့ ဆိုပြီး အကို လှူခဲ့ပါသလား????
အဲဒိလိုပဲ ကိုဖက်ရေ့….။ တစ်ချို့ဆိုင်တွေကဆို အလှူလာမခံရဘူးတောင်ပြောလွှတ်တာ….။ ကျောင်းအတော်များများက လူစည်ကားတဲ့ နေရာတွေမှာ အလှူမခံဖို့ စည်းကမ်းထုတ်ထားတယ် ကြားတာပဲ…။ ဒါပေမဲ့…… မရပါဘူး…။ လူစည်တဲ့ နေရာအလှူခံမှ များများစားစားရမယ်ထင်နေသလားမပြောတတ်ပါဘူး…။
အာဂ ဆရာလေး ပိစိကွေးပါလား
ဟိုလူကလဲ ပေါ်တင်ပဲ မျက်နှာလွှဲနေတယ်..
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထဲ ဆွမ်းခံကြတာတောင် တော်တော်ရုပ်ပျက်ပြီ
အရင်က ဆိုင်ထဲ ဆွမ်းခံကြွတဲ့ ကိုရင်တွေကို မြို့ နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် ကိုယ်တိုင် ကြိမ်လုံးကိုင်ပြီး
ဒါနဆန်များ မေတ္တာရပ်ပါတယ်။ မရပ်ရင် တစ်ခွက်လောက်ပဲ တိုက်ပါ။ ထမင်းမစားရသေးလို့ပါ။ အဲ ရိုးရိုးတောင်းတဲ့သူတွေနဲ့မှားကုန်ပြီ….
(သူဂျီးက မတူတဲ့ အမြင်ပြောဆိုလို့လေ) …
ဒီဖက်က တစ်ယောက်က ပိန်ပိန်၊ဟိုဖက်လှည့်နေတာ ကိုဖက်တီးကြီးလားဗျ။
ဘာသာရေးတို့ သာသနာရေးတို့ ဆိုတာ နောက်မှထား
အဲ့သည်ဆိုင်မျိုးကို ဘယ်တော့မှ သွားမသောက်နဲ့
သူ့ဆိုင်ရဲ့ အခြေနေကို စားပွဲထိုးတွေ ကောင်တာထိုင်တဲ့သတ္တဝါတွေ
ဒါက ဆိုင်တာဝန်ခံတွေရဲ့ အလုပ်ဘဲ
ဆိုင်ထဲကို မသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေက စားသုံးသူတွေကို နှောင့်ယှက်ရင်
ဒါက သဂျီးမလာခင်ကျုပ်က ကြိုဆော်ထားတာ
ဒါကတော့ ခင်ဗျားတို့လည်း သက်ဆိုင်ရာ သာသနာရေးဌာနကို
ဘယ်ကလာသလဲ ဘယ်နယ်ကလဲ ဘာညာ
ဟိုလူကလည်း ဟိုလူ …
ဆရာလေးကလည်း ဆရာလေး …. ပါပဲ။
ဒါနဲ့ ဆရာလေးတွေရဲ့ ဒုက္ခကလည်း မသေးဘူး ထင်တာပဲ။
လစ်မစ် … အဲဒီ လစ်မစ် မပြည့်ရင် … သူတို့ ဘုံပျောက်သွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိနေတယ်ဗျို့ ။
ဒါကြောင့် လစ်မစ် မပြည့်မချင်း နေရာမရွေး မေတ္တာရပ်ခံနေကြရတယ်လို့ ထင်တာပဲ ။
အမှန်ကတော့ ဒီလိုတောင်းစားသူက အစစ်မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလို သီလရှင်လို၊ ကိုရင်လို ၊ ဘုန်းကြီးလို အယောင်ဆောင်ပြီးတောင်းရတာ
အဲဒါတွေကြောင့်ပဲ သာသနာလဲ အရုပ်ဆိုးရတာ။ အထင်သေးခံရတာ။
ဒီလို လုပ်ဝ မဖြစ်သင့်တာကတော့ အမှန်ပါပဲဗျာ ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းပေးကျမလည်းလို့
အဖွဲအစည်းတွေ မရှိကျဘူးလားဗျာ ….။
မိန်းကလေး.. တောင်းစား.. အရက်ဆိုင်..
လောလောဆယ်ကတော့ …ဆိုင်မှာတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့..။ ဒါကလက်ပူတိုက်တာပဲ.. တကယ်က.. နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်..
ရိုးရိုးတောင်းစားလဲရတာဘဲ သာသနာအရခြုံပီးတောင်းတာက ယုတ်ညံ့လွန်းပါတယ် ရပ်ကွက်ထဲ မှာကားနဲ့
အော်လန်ကြီး အသံကုန်ဖွင့် အလှုခံနေတာတွေလဲစိတ်ပျက်စရာပါဘဲ
ငွေတောင်းလို့မပေးရင် မကျေမလည်နဲ့ကြည့်သွားတာလဲ လုပ်သေးဗျာ
ကိုယ်တွေ့ပါဗျာ။ တစ်လောက ကိုပေတို့လာတော့ ကိုဘီလူးချိန်းတဲ့ဆိုင်မှာ။
သီလရှင်လေးတွေ စာအိတ်ကို စားပွဲပေါ်လာချပေးတယ်။
အဲဒီစာအိတ်ထဲ ပိုက်ဆံထည့်ပေါ့လေ။ ပြန်ပေးပြီး မောင်းထုတ်လိုက်တယ်။
တောင်းစားမနေကြနဲ့ သွားသွား ဆိုပြီး။
ဒီပုံထဲကလူ မျက်နှာလွှဲနေတာ နေပါစေ။ သူ့ခမျာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတာကို သည်းခံပေးနေတာ။
သီလရှင်က ဥပုသ်နေ့ မတိုင်ခင် အဖိတ်နေ့ တရက်နဲ့ ရှေ့တရက် မှာ ဆန်ခံကြွလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီနေ့တွေ မဟုတ်ရင်တော့ အစစ်မဟုတ်ဖို့များပါတယ်။ မထွက်ရဘူးလို့ ကြားဖူးတယ်။
အစိုးရက ကြီးကြပ်ပြီး အဲလို ကလေးတွေကို အတုဆို စစ်မေးပြီး လေ့ကျင့်ရေး စခန်း သို့မဟုတ် မိဘမဲ့ ကလေးကျောင်းတွေကို ပို့သင့်တယ်။ အစစ်ဆိုရင် ကျောင်းကိုပို့.. ကျောင်းက တဆင့် ဆုံးမ ခိုင်းပေါ့။ လူတွေတောင် မှတ်ပုံတင်စစ်သေးတာပဲ ဘုန်းကြီးတို့ သီလရှင်တို့လည်း ရဟန်းကဒ် သီလရှင်ကဒ် ရှိနေတာပဲ ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးပေါ့။ အစိုးရမဟုတ်ရင်တောင် ကလေးအရွယ်တွေမို့ နေထိုင်တဲ့ ကျောင်းက ကျောင်းသားကဒ် ကဲ့သို့ ထုတ်ပေးပြီး ကျောင်းက အာမခံပေါ့။ ကဒ်မပါရင်တော့ ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းကို ပို့.. ဒါဆိုရင် ဂိုဏ်းထောင်ပြီး တောင်းစားခိုင်းတဲ့ ကလေးတွေ ပ ပျောက်သွားမယ် ထင်တယ်။
အစ်မရေ…အဲ့ဒီကဒ်ကလည်း … မှတ်ပုံတင်လုပ်သလိုပဲ ခက်သတဲ့ …. လွယ်လွယ်မရဘူးဆိုလား .. အချက်လက် ပြည့်စုံတယ်ဆိုလားပဲ ….. အိမ်ကို ကြွနေတဲ့ ဘုန်းကြီး ၊ ကိုရင် တချို့မှာတောင် ကဒ်ပြားမရှိတဲ့ သူတွေရှိနေတယ် …… ။
ရဟန်းဝတ်တာ ၃၀ါ ဆိုရင်လား မသိဘူး ကဒ်ရတယ် ပြောတယ်။
ရဟန်းခံတဲ့ ထောက်ခံစာကို ရဟန်းဝတ်ပေးပြီး ကမ္မ၀ါ ဖတ်ပေးတဲ့ ဆရာတော်က လက်မှတ်ထိုးပေးရတယ်။
အလွယ်ဆုံးကတော့ ကျောင်းတံဆိပ်တုံးနဲ့ ကျောင်းသား ကဒ် ထုတ်ပေးလိုက်ရင် ပြီးတာပဲ.. အဲဒီလို လုပ်တဲ စနစ် ဖြစ်အောင် လုပ်သင့်တာ ပြောတာပါ။
အဲဒီ ကဒ် ကိုရဖို့ လူတွေထက် ဆိုးပါတယ်ခင်ဗျာ…ကျနော် ကိုယ်တွေ့မို့ပါ..
လူဘဝမှာ ပိုက်ဆံပေး ပြီး လုပ်လို့ လွယ်ပေမဲ့ သူတို့ဘဝမှာ ဘသူလာပေးမှာလဲ ခင်ဗျာ့..
စီမံချက်ရှိ်တဲ့ချိန်ဆို မြန်မြန်ရပြီး ..မရှိတဲ့ချိန်ဆို ရင် ဟိုဆရာတော် လက်မှတ် ဟီဆရာတော် လက်မှတ်
မြို့နယ် ဦးစီးလက်မှတ် ပြီးတော့ လဝက ကလူတွေ ကလဲ ငဝိုင်းမလာ လို့ စူစူအောင့်အောင့် လုပ်မပေးချင်ပါဘူး…
ဦးဖက်ရေ၊ မန္တလေးမှာတော့ အခုနောက်ပိုင်း အရေးယူမှုတွေ လုပ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
သာသနာတော် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ ကတွေ့ရင် ဖုံးဆက်တိုင်ရင် လာပြီး အရေးယူပါတယ်။
အောက်က သတင်းလေး အတိုင်းပါ။
သမဏသာရုပ္ပမ ဖြစ်သော (ရဟန်း၊ သာမဏေများ၊ သီလရှင်များနှင့် မသင့်လျော်သော) ကိစ္စများ ရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် မလိုက်နာပါက သံဃာ့ ဥပဒေများအရ အရေးယူ ခံကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး သံဃနာယက အဖွဲ့က စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာသည်။ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးတွင် သမဏသာရုပ္ပမ ဖြစ်သော ရဟန်းသာမဏေများ၊ သီလရှင်များနှင့် မသင့်လျော်သော ဈေး၊ ကားဂိတ်၊ ဘူတာ၊ လူစည်ကားရာ နေရာများတွင် အလှူခံခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ် ဆိုင်ကယ်များကို ကိုယ်တိုင် မောင်းနှင်စီးနင်းခြင်း၊ ပွဲလမ်းသဘင်များ ကြည့်ရှုခြင်း၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်များတွင် နေ့လွဲညစာ စားသုံးခြင်း စသည်တို့မှာ သာသနာတော်နှင့် မအပ်စပ်သည့် အပြင် ဝိနည်းဓမ္မကံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သံဃာ့ ဥပဒေများအရပါ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များ ငြိစွန်းနေပါသဖြင့် ရဟန်းသာမဏေ သီလရှင်များ အားလုံး ရှောင်ကြဉ်ရန် တာဝန် ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားလွှာ အမှတ် (၈၅)အရ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ သံဃနာယက အဖွဲ့အသီးသီးက သံဃာ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ဖြင့် မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက် ကြရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ယခုလက်ရှိလည်း ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းမှ ရဟန်း၊ သာမဏေ၊ သီလရှင်များအားလုံး ဝိနည်းစည်းကမ်း ဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာကြရန်နှင့် မလိုက်နာပါက သံဃာတော်များ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့က မဖြစ်မနေ သံဃာ့ဥပဒေများနှင့် အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်ရှိ သာသနာတော် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့မှ ဆရာတော်များက မိမိတို့ မြို့နယ်တွင်းတွင်လည်း အထက်ပါ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်အတွင်းတွင် ရဟန်း၊ ကိုရင်များနှင့် သီလရှင်များ မသင့်လျော်သော အမှုကိစ္စများ ပြုမူဆောင်ရွက်နေပါက နီးစပ်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ သံဃနာယကရုံးများနှင့် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ ဖုန်းများဖြစ်သော ၀၉- ၆၅၀၂၁၃၆၊ ၀၉-၂၀၃၄၉၀၅၊ ၀၂-၆၆၄၆၂ တို့ထံ ဆက်သွယ် သတင်းပေး တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း မိန့်ကြားသည်။
အနီးနားမှာလည်း သီလရှင်ကျောင်းတွေက ရှိနေတော့ … အစစ်မှန်လား … သာသနာ့အရေခြုံလားမပြောတတ်ပေမယ့် …… သင်္ကန်းမြင်လျှင် ကြည်ညိုတတ်ကြတဲ့ ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ သဒ္ဓါတရား ကိုင်းရှိုင်းမှုကို ခုတုံးလုပ်တဲ့ အလှူခံတွေ အများကြီးဖြစ်လာတော့တာပေါ့ ….. ။
တောင်းရဲတဲ့ သတ္တိရှိလျှင် တောင်းကြပါစေ … သင်္ကန်းယုံပြီး လိမ်တောင်းတာကတော့ အမုန်းဆုံးပါပဲ … ။
သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်း …. သင်္ကန်းအရေခြုံ တောင်းစားသူများကို စိစစ်သင့်ပါပြီ ။ မဟုတ်လျှင် တခြား ဘာသာဝင်တွေရဲ့ အထင်သေး ၊ ရှုံ့ချခြင်းကို ခံကြရတော့မယ်လေ … ။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ……. ဘီလူးကြီးရေးခဲ့ဖူးတဲ့ … ကိုရင်တပါးကို လှူခဲ့ဖူးတာလေး သတိရမိတယ် … သပိတ်ပူပူနဲ့ လာတိုက်နေတဲ့ ကိုရင်ကို …. သူမေးတာ မှန်အောင်ဖြေနိုင်လျှင် လှူမယ်… မဖြေနိုင်လျှင် … ဒီအတိုင်းထွက်သွားရမယ်လို့ သဘောတူညီချက်ထားပြီး … အမေးဖြေလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ …. ကိုရင်လေးလည်း .. မဆိုင်းမတွဖြေနိုင်ခဲ့ပြီး လိမ်လည်တဲ့ အမူရာ မတွေ့တာကြောင့် … သူ လှူဖြစ်ခဲ့ပါသတဲ့ ……… ။
တခုပြောပါရစေနော်…စေတနာဟံ ဘိက္ခဝေ ကမ္မံ ဝဒါမိ လို့ ဘုရားဟောပါတယ်….
ကို့ စေတနာ ကို ဖြူအောင်ထားပါ…အကျိုးရှိပါတယ်…မမှန်တဲ့သူ က သူလမ်းနဲ့သူ သွားပါလိမ့်မယ်…
ငါ့ဝမ်းပူဆာ မနေသာကွယ်။ နင်တို့က အပြစ်ပြောနေရအောင် သီလရှင်ကျောင်းကို လှူရကောင်းမှန်း သိလို့လား…။
ဒီလို အလှူခံဖို့နေနေသာသာ အရက်သေစာ ရောင်းချပြီး ရတဲ့ငွေကို ဘုန်းကြီးရဟန်း အလှူခံမိရင် ၀ိနည်းတော်နဲ့ မညီဘူးတဲ့ဗျ……
ဒီက အကိုေ၇ သေသေချာချာ လေ့လာပြီးမှ ပြောပါလား ခင်ဗျာ… ဝိနည်း ဆိုတာ အရမ်းကျယ်ပြန့်ပါတယ်…
ကျနော်တို့ လူတွေ အနေနဲ့ သာသနာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေ မှာ ဝေဖန်တာ မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ…
ဖီလ်း အပြည့်နဲ့ မှိန်းနေတာ… ကိုယ်မဟုတ်လို့ တော်သေးတာပေါ့။
နောင် ဆို သတိထားမှ… ရေချိန်လေး မှန်နေတုံး ကင်မရာတွေကို ကြည့်ရှောင်မှ။
အဲဒါတွေလည်း သာသနာရေးအဖွဲ့တွေက ရှာဖွေစစ်ဆေးအရေးယူသင့်ပါပြီဗျာ။
ဘောကွင်းဒေါင့် “၀ါးစတင်း” ဟုတ်?
နောက်ဆို ဘာသာရေးရဲ တွေ ပေါ်လြာ့ပီး လူတွေပါ ဟိုလိုနေ ဒီလိုနေ လုပ်လာရင် ဒုခ၊ တာလီဘန် ခေတ်လို၊
အီရန်လို။ တားတော့ ကြီးတဲ့ အရွယ် ဆို လက်အုပ် ချီ ပြီး ကန်တော့ပါစေ ပြောရင် တန်းလစ်တာပဲ၊နေ ပါ
တကယ်လို့များအရေခြုံမှန်းသိလို့ မောင်းထုတ်လိုက်ရင်ဘေးလူက၀င်ပြီး သာသာနာမစော်ကားနဲု့ဆိုပြီးဝင်
တကယ်ကိုတိတိကျကျသေသေချာချာလုပ်ပြန်ရင်လဲ ကြားက ၀င်ပါတဲ့သူကလဲတကယ်ရှိတယ်နော်။
တကယ့်သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်အစစ်က ဒီနေရာမျုိးလုံးဝမလာပါဘူး။
ဆရာပြောတာ မှားနေပါတယ်….အစစ်တွေလဲ ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ..
ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ လျောက်ပြန်သံပေးပြီး..ရင်ကြီးနဲ့မလောက်ဘူးထင်ပါရဲ့ ရင်လေးတွေပါ ခိုင်းစား
နေကြတာ ကြာပါပြီ။ မသိရင် စေတနာဗရပွနဲ့ တကယ့်ကယ်ရှင်ကြီးတွေလို ကြောင်သူတော်(သီသူတော်)
ယောင်ဆောင်ပြီး လုပ်နေကြတာက ကလေးတွေကို တောင်းစားခိုင်းနေတဲ့ ဂိုဏ်းတွေလိုဖြစ်နေပြီ။
ဟုတ်မှာပါ။ သာသနာကလည်း အဲသလို ပုဂိုလ်မျိုးတွေကြောင့် အဆိုတော် ထူးအိမ်သင်ပြောသလို
အဲဒီ ဆရာလေးက အတုဖြစ်စေ အစစ်ဖြစ်စေ…အကို တို့ အမ တို့ ဘယ်လောက် လူနိုင်ပါသလဲ….
အစစ်ဖြစ်ရင် ဆွမ်းတနပ် လူနိုင်ပါသလား? အကိုတို့ အမ တို့ အိမ်ပြန်ရင် ထမင်းအဆင်သင့် ရှိတဲ့လူ များမှာပါ….အကို အမ တို့ထဲမှာ ထမင်းတနပ်စားဖို့ နေပူခြေပူခံ တွေ့တဲ့လူ အလူခံ မတောင်းချင်လဲ တောင်းရတဲ့ အတွေအကြုံ ရှိတဲ့သူများပါပါသလား…
ကိုယ်ချင်းစာလိုက်ပါဦး…အဲဒီဆရာလေး အသက်ရှိလှ ၁၀ နှစ် ပေါ့…အိမ်က ညီမလေး တွေ သမီးလေးတွေ လောက်ပဲ ရှိမှာ. သူလဲ လူပါပဲဗျာ..ထမင်းဆာတတ်မှာပေါ့…
ကျနော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က ကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံခဲ့ရတာ မို့ပါ….
သူတို့ အလူမခံ ပဲ နေရင် ဘယ်က ဘာနဲ့ စားရမှာလဲ ? ဘသူကျွေးမှာလဲ ခင်ဗျာ…အလူခံလို့ရတဲ့ နေရာမှန်သမျှ အလူခံဖို့သွားရမှာပဲ ဗျ… အကို တို့အမတို့မယုံဘူးဆိုရင် ဘယ်သူ အကူအညီမှ မပါပဲ ခဏလောက် ဘုန်းကြီး သီလရှင် ခဏ ဝတ်ကြည့်ပါ ခင်ဗျာ..
ကျောင်းမှာ ထိုင်နေပြီး ဆွမ်းစားရတဲ့ ဘုန်းကြီး ကိုရင် သီလရှင် ရှိသလို အဲဒီလို အလူခံ လို့မရလို့ ဆွမ်းမစားရတဲ့ ဘုန်းကြီး ကိုရင် သီလရှင် တွေ ရှိတယ် ဆိုတာ……
ကန်တော့ပါ၇ဲ့ခင်ဗျာ…ဒီ post ကိုေ၇းထားတဲ့ သူ ကို ခုမှ ကျနော် သိပါတယ်…အကိုေ၇ အကိုလဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေေ၇ာက်ဖူးမှာပါ….ဆရာတော်တွေ ကို မေးကြည့်ပါလားအကို…. လာဘော အလာဘော ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကို….
မြင်မကောင်းပေမဲ့ အကိုေ၇ ဝမ်းေ၇းအတွက် သူတို့လေးတွေ ရှာစားရတာပါ ခင်ဗျာ…ကျနော် တို့လဲ မမြင်ချင်ပါဘူး…
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်လဲ မလူနိုင်ဘူး ခင်ဗျာ…တတ်နိုင်သလောက် မုန့်ဖိုးထဲက မျှလိုက်ကြတာပေါ့ ခင်ဗျာ…